Investment Ukulingisa Foundry, Steel Investment Ukulingisa - Yungong
Uchungechunge lweZKJB-300 Vacuum Mixer
Isici cleaner yethu ukugxusha mixer kusekelwe ejwayelekile international futhi sihlanganisa izici okusheshayo-eqandisiwe ukudla processing umkhakha.
Ngokuya ngezidingo zakho
khetha imikhiqizo oyikhonzile
Imikhiqizo isetshenziswa kabanzi kumaValves pumps impellers pipe fittings,
ingxenye yezimoto, imishini yokudla, izesekeli zemishini yamaminerali, imikhiqizo yethuluzi lehadiwe nokuhlobisa insimbi.
Impompo ne-Valve Component ...
Amapayipi we-Plumbing ne-Pipe ...
Metal Ukuphambukisa tube ukubola ...
Pump nokufaka Cas ...
Isicelo ku: Impeller ...
Ukufakwa kwezimali okusetshenzisiwe kusetshenziswe ...
Idivayisi Yezokwelapha Ca ...
Ziyizinto eziyinkimbinkimbi ...
I-OEM Marine Invest ...
Singahlinzeka ngotshalomali c ...
Ukusakazwa kwehadiwe ...
Izinto zokuhlobisa izinsimbi: ...
Precision ekubunjweni ...
Izingxenye zemishini yokudla—— packi ...
Ukusakaza ngomlilo ...
Zonke izingxenye zenziwe ...
Izinzuzo ze-Precision ...
Insimbi Yokuphambukisa Insimbi
Pump Valve Coupling Quick
Le nkampani ibandakanyeka kakhulu ekubunjweni ngokunemba nasekusebenzeni imishini yokudla. Inqubo yokukhipha utshalomali yi-silicon sol, enomphumela waminyaka yonke ongaba ngamathani ayi-3000 wokusakaza.
Yiziphi izinto ezingathinta ikhwalithi yokusakazwa kwabakhiqizi bensimbi bensimbi?
Meyi / 06/2021
Ikhwalithi yabalingisi inethonya elikhulu ezintweni ezisebenza ngomshini, njengempepho yamaphampu ahlukahlukene, ubukhulu bomgodi wangaphakathi wezingxenye ze-hydraulic, igobolondo elicutshungulwayo, ukunemba komugqa wokubumba nobukhulu bendawo, njll. Izinkinga zizokwenza ...
Abakhiqizi be-Precision casting bachaza inqubo ye-silica sol casting ngokuningiliziwe!
Inqubo yamanje yokufaka imali yokutshala imali ikhula ngokushesha, futhi iyathandwa ngenxa yokubukeka kwayo okuhle nokuhlanzekile. Ngokusho mkhuba wamanje, izingxenye izingxenye ekhiqizwa ngokunemba thusi esikhathini esizayo ziyoba ngokwengeziwe ezinkulu. ...
Izinyathelo ezithile ezibalulekile zenqubo yokulingisa ekusakazeni ngokunemba!
Precision thusi kuyinto ejwayelekile ekubunjweni inqubo steel ekubunjweni abakhiqizi, kodwa ukuthuthukiswa wamanje akuyona njengoba ezivamile njengoba castings yensimbi futhi castings steel, kodwa ngokunemba thusi angathola ukuma kuqhathaniswa olunembile futhi kuqhathaniswa okusezingeni eliphezulu ekubunjweni ngokunemba. Ukuya kokuningi ...
Ithemba lomkhakha wensimbi esifundazweni saseHebei sokuThuthukiswa koMnotho
Ukuze silwele ukuvula isimo esisha sokuthuthukiswa kwekhwalithi ephezulu yomkhakha wesisekelo esifundeni sethu, ngoMashi 24, iqembu eliholayo lesifunda sethu lenze uphenyo lwensimu ezinhlanganweni ezifanele zomkhakha, izikhungo zocwaningo, amabhizinisi ezisekelo kanye .. .
I-Jr-d120 iyisetshenziswa esithandwayo, kepha noma nini lapho uphatha inyama eluhlaza, ukuhlanza kuyadingeka ukugwema amabhaktheriya namagciwane kusuka ezinsaleleni. Kodwa-ke, ukuhlanza i-grinder yakho akufani nokuhlanza abanye abapheki. Ngemuva kwalokho, ukugcinwa okufanele kwezakhi zayo kuzosiza ekuqinisekiseni ukuthi igcinwe kahle ...